Lọ ọrụ ihe ndozi, ndị na - enye ngwaahịa - China Hangers Manufacturers
Mankeumman & FM depụtara Nrụgide Ọrụ Clevis hanga kpaliri
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị oké ọrụ clevis hangers bụ Mankeumman & FM mma. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East, Europe na Asia. Ọzọkwa, enwere ike ịhazi ha dịka ihe ị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya rụọ roba, tinye ma ọ bụ ọta. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: A ga-ebu ya ụzọ, zinc plasta, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Mankeumman Edepụtara Light Duty Clevis hanger maka Factory Direct Sales
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị ìhè ọrụ clevis hangers na-Mankeummanu mma. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, enwere ike ịhazi ha dịka ihe ị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya rụọ roba, tinye ma ọ bụ ọta. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: A ga-ebu ya ụzọ, zinc plasta, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Ọla kọpa plated Swivel Ring hanger maka ọla kọpa tube
Dị ka otu n'ime ndị na-asọmpi ụlọ ọrụ kachasị asọmpi, ndị na-agba ọla kọpa ọla kọpa anyị enwetawo nnukwu ewu ewu gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Na ha nwere ike ahaziri dị ka gị chọrọ, n'ihi na ihe atụ, ha nwere ike e mere na roba, fanye ma ọ bụ ọta. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
UL & FM Ndepụta Swivel Ring hanger na Nnọọ-lined
Dị ka otu n'ime ndị na-asọmpi asọmpi nke ụlọ ọrụ, ndị na-agbanye mgbanaka anyị na-agbanye ọkụ bụ ndị UL & FM kwadoro. Ha anatawo nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Ọzọkwa, enwere ike ịhazi ha dịka ihe ị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya rụọ roba, tinye ma ọ bụ ọta. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: A ga-ebu ya ụzọ, zinc plasta, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.